Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
By admin	 On Jun 9, 2017
Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 09 June 2017 shir Jaraa’iid oo uu ku qabtay qasriga Madaxtooyada Garoowe waxaa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah argagixisada Al-Shabaab, kaas oo lagaga safaynaayo Dhammaan Degaanada Puntland.
Dr Cabdiweli ayaa ugu horayn tacsi u diray eheladii, qaraabadii iyo qaran kii ay ka baxeen dhamaan intii ku nafweydey dagaalkii shalay ay ciidamada Puntland la galeen argagixisada Al-Shabaab, kaas oo ka dhacay degaanka Af-urur, waxaana uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland sida geesinimada leh ee ay isaga difaaceen burcad dimeedkaasi Al-Shabaab.
“Sidaad lasocotaan waxaa shalay oo taariikhdu ahayd 08 June 2017 ay burcad dimeedka Al-shabaab kusoo qadeen weerar gaadmo ah tuulada Af-urur iyo xerada Daraawiishta ee Puntland, waxay weerareen dad muslimiin ah, cibaadaysanaya oo ku jira bil Ramadaan, waxaan bogaadinayaa oo amaan u soo jeedinayaa ciidamada Puntland ee sida geesinimada leh dadkooda iyo deegaankooda u difaacay, kuna shahiidey weerarkaas wuxuush nimada ah ee ay soo qaadeen wax matarayaasha Al-shabaab’’ ayuu yiri Madaxweynaha Puntland
‘’waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamada difaacayey dadkooda iyo saldhigooda ciidan, sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqeen tuulada Af-urur sharwada yaashu’’ ayuu yiri Dr Cabdiweli.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland meelkastay oo ay joogaan inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah kooxda Ugus ee Al-Shabaab ee kusoo duuley deegaankooda, kaas oo lagaga sifaynayo kooxdaasi dhammaan degaanada Puntland, waxaana uu hoosta ka xariiqay in Puntland iyo shacabkeeduba ay ka wada qeyb qaadan doonaan dagaalkaasi ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu magcaabay guddi Wasiiro ah kuwaas oo ka shaqayn doona qiimaynta dhibta dhacday iyo gurmadka dadka wax yeeladu kasoo gaarey dagaal kaasi.
“waxaan shalay magcaabay guddi Wasiiro ah oo soo qiimeeya dhibta dhacday kana qayb qaata gurmadka dadka dhaawaca ah iyo dadkii wax yeeladu kasoo gaartey dhacdadaasi foosha xun’’ ayuu yiri Cabdweli Gaas.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Dr. cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay dawladda Fadaraalka Soomaaliya iyo beesha caalmka inay ku taageeraan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha argagixisada ah.
“Waxaan ugu baaqayaa Dawladda Fadaraalka iyo beesha caalamka inay nagu tageeraan dedaalka adag ee aan kula jirno ladagaalanka sharwadayaasha usoo tafa-xaytey inay gumaadaan shacbiga Soomaaliyed’’ ayuu hadalkiis ku so gabo gabeeyay Madaxweynaha Puntland.
The post Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab appeared first on Ilwareed Online.
Sacuudiga oo soo saaray Liiska shaqsiyaad & Shirkado argagixiso ah oo Qatar taageerto
Saraakiisha hay’adaha ammaanka oo soo saaray amaro cusub